KAALINTII AY HOOYADU KU LA HAYD NOLOSHII REER GUURAAGA IYO DHIBAATOOYINKII AY KA DHAXASHAY ​Cumar Axmed Cali; Q/3aad | ToggaHerer
← qorshe qashinka ppp dawlada hoose shirkadaha
Wasiirka Horumarinta Maaliyadda Mudane Yusuf Oo Markii U Horaysay Taarikhda Somalilad Soo bandhigay Kulanka Falanqaynta Miisaaniyad Sannadeedka 2018 Puplic budget discussion →
KAALINTII AY HOOYADU KU LA HAYD NOLOSHII REER GUURAAGA IYO DHIBAATOOYINKII AY KA DHAXASHAY ​Cumar Axmed Cali; Q/3aad
Published on March 11, 2018 by Magan
Labadii qormo ee hore waxaan kaga hadlay seddex ka mid ah caqabadihii ay haystay hooyooyinkii hore reer guuraaga ahaa, waxaanay kala ahaayeen qodobka koobaad oo ahaa daryeel la’aantii caafimaad ee haysatay hooyooyinkii reer guuraaga ahaa . Qodobka labaad oo ahaa dhibaatadii hooyooyinka ka qabsatay hirgalinta iyo horumarinta Aqalka-soomaaliga. Qodobka seddexaad oo isna ahaa sidii ay hooyooyinku ugu dhibaatoon jireen markay reeruhu guurayaan. Qormadan maanta oo ah tii ugu danbaysay waxaan kaga hadli doonaa haddii Alle idmo, qodobka afraad oo ah, tacadiyadii ay hooyooyinku kala kulmeen lamaanahii ay nolosha la wadaagayeen iyo qodobka shanaad oo ah sidii hooyooyinka looga dayriyay taladii qaysaskooda.
4) gacan ka hadalka; dhibaatooyinkii haystay hooyooyinkii reer guuraaga ahaa waxa ka mid ahaa kuwa dhaqan oo ay kala kulmeen noloshii baadiyaha ee ay qaybta ka ahaayeen, waxaana la odhan-karaa waxa ugu wacnaa bulshada Soomaalida oo ka durugsanayd magaalooyinka iyo meelihii aqoontu taalay, islamrkaana aanay jirin maamul dowladeed oo bulshada xuquuqdeeda u ilaaliyaa. Waxa taa laga dhaxlay in hooyooyinku la kulmaan xadgudyo tiro badan, oo kaga imanayay raggii ay nolosha la wadaagayeen, ku waa soo ahaa niman ad-adag oo aan u dhaga nuglayn ilaalinta xuquuqda hooyooyinka ay masuulka ka yihiin. Waxay taasi horseeday in deegaamada Soomaalida ku baahaan gaboodfalyo ka dhan ah, hooyooyinkii Soomaaliyeed ee marka horeba la daalaadhacaayay duruuftii iyo waayihii qadhaadhaa ee ku haystay dhulkii baadiyaha ahaa.
Sideedaba haddii aadamuhu waayo maamul iyo sharci ay ku kala baxaan waxay isku-badalaan bahalo is cunaya oo aanuu midna midka kale u aabo-yeelaynin, waxaana halkaa ka dhasha tacadiyo xanuun badan oo dhaawac ku ah xuquuqda insaanka. Sidaa soo kale wiilkii Soomaliyeed ee ku barbaaray meelihii aanay ka jirin maamul iyo sharci lagu kala hagmaa, islamarkaana aan lahayn aqoon iyo waayo-aragnimo u iftiimisa dariiqa uu noloshiisa u marilahaa, waxa uu u xuubsiibtay in uu noqdo qof aan naxariis iyo damqasho midina aanay agtiisa oolin, cidkasta oo uu ka xoog roonaadana cagta mariya. Hadaba hooyadii oorida u noqotay ninkii caynkaa ahaa, waxay kala kulantay talaabooyin qalbi-jab iyo niyad-xumaan ku beeray, waxaanay ku dhawaatay in ay noloshaba quus ka istaagto, sidoo kalena ay nafteeda haaraanto iyadoo ka shalaayaysa in ay oori u noqotay araxlaawe caadaystay ku tumashada xuquuqdeeda.
Hadaba xaaladaa murugada leh ee hooyooyinkii Soomaaliyeed ku haysatay dhulkii kaymaha ahaa, waxa sabab u ahaa wiilkii Soomaaliyeed ee ku kaalin galay noloshii baadiyuhu waligii muu arag iyadoo aabaha loo ciqaabayo danbigii uu ka galay afadiisa, waxay taasi ku dhiirisay in uu si joogta ah ugu tunto xuquuqda ooridiisa, maadaamo oo uu ogyahay in aanay cidina u ciqaabaynin dunuubta uu ka galo afadiisa.
Waxa kaloo xanuunkeeda lahayd marka ay isa-seegaan lamaanaha nolosha wadaagayaa, islamaraana xaajadu ka taagtaaganto, hooyada waxay u ahayd maalin madow oo soo martay nolosheeda, sababtoo ah waxa loo gaysan jirey gaboodfalyo ka dhan ah xuquuqdeeda, maxaayeelay odayga reerku waxa uu ahaa mid la soo taagan hangoolkii uu reerka ku oodi-jirey, kaa soo uu si axmaqnimo leh ugu dhibaatayn jirey ooridiisa, isaga oo hilmaansan in uu yahay qofka ay dulsaaran tahay ilaalinta xuquuqda ooridiisu. Waxa marar qaarkood dhaci-jirtey in ay hooyadu ku wayday qaybo ka mid ah laxaadkeeda ay irkanayso, islamarkaana ay noqoto qof naafo ah oo aan ku beegsan akraynin howsha baaxada leh ee taalay baadiyaha. Waxa kaloo iyana xanuunkeeda la hayd hooyadu may haysan cid ay uga dacwooto xadgudubyada ay tirsanayso iyo xuquuqdeeda sida joogtada ah loogu tumanayo, sababta oo ah wadcigii iyo waayaha ay ku noolayd uma arkaynin in Hooyada xaqeedii iyo xuquudeedii aasan tahay.
5) Talo maroorsigii aabaha; Sida uu inabarayo waayaha nololeed ee ka tisqaaday arlada guudkeedu, dadku Kama maarmaan nidaam maamul oo ay noloshooda ku maareeyaan, kaa soo ka bilaabma lamaane si wadajir ah u wadaagaya howlaha maamul ee qoyskooda. Waxa uu aabohu leeyahay doorka hogaamineed ee ugu mihiimsan howlaha maamul ee qoyskiisa, halka hooyaduna tahay qofka labaad ee ka caawiya hawlaha maalin laha ah ee horyaala qoyskooda. Sidoo kale haddii aabaha taladu ka waydawdo ama uu si waafiya u hogaamin kariwaayo arimaha maamulka ee qoyskiisa, waxa isgarab-taagi-jirtey oo la maarayn jirtey hooyada reerka, iyadaana ahayd qofka labaad ee ka caawiya wixii caqabado ah ee la soo darsa saygeeda. Aabuhu’se marna ma soo dhawayn-jirin in ay hooyadau faraha la soo gasho arimaha maamul ee qoyskiisa, sababta oo ah aabuhu waxa uu aaminsan yahay in hadii uu qaato talada ooridiisa ay ceeb ku tahay raganimadiisa, sidoo kalana ay dhaawacayso doorkiisa hogaamineed ee uu u igman yahay, taa saana sababtay in ay hooyooyinku ka go’doomaan taladii qoyskooda. Sida ay taariikhdu xusayso aabayaashii hore ee ku barbaaray noloshii baadiyuhu may xaalaynin in ay talada wax ka siiyaan hooyooyinkii ay nolosha la wadaagayeen, waxaanay taasi horseeday in hooyooynkii laga laga dayriyay talada qoyskooda, islamarkaana loo diido in ay qaataan doorkii ay ku la haayeen arimaha maamul ee qoyskooda. Inkastoo ay jireen aabayaal fara kutiris ah oo iyagu u ogolaaday in ay talada wax ka siiyaan ooriyihii ay qabeen, hadana ku waasi may ahayn ku matali Kara xaalada guud ee meesha taalay.
Sida ay inoosheegtay diinteena suuban, ama ay inoo iftiimisay waayo aragnimadii aynu ka dhaxalnay taariikhdii ay soo martay nolosha aadamuhu, waxa qudha ee guul lagu gaadhaa waa talada oo la wadaago, go’aamaduna noqdaan kuwo laga fiirsaday.
Si kastaba xaalku ha ahaadee waxa biyo kama dhibcaan ah in hooyooyinka loo diiday qaybtii ay talada ku la haayeen, si aan gabasho lahaynna aaboyaashu uga horjoogsadaan in hooyooyinku talada la wadaagaan.
Sababta meesha taalayna waxay ahayd, bulshada Soomaaliyeed ee ku barbaartay dhulkii magaalooyinka ka fogaa oo aaminsanaa in aan haweenku wax talo ah oo laga dugsado aanay la hayn. Ciddii haween talo moodaana ay tahay maangaab aan habeen loo hoyan.
Waxa taa laga dhaxlay in ay hooyooyinku faro madhan ka joogsadaan taladii qoysaskooda, oo haddii ay isku dayaan in ay talada wax ku yeeshaan cidiba ka hoos qaadi waydo, talo kasta oo ay soo jeediyaana ay noqoto hal bacaad lagu lisay.
Waxa mararka qaar dhici-jirtey in ay hooyadu ka talo fiicantahay sayga ay nolosha la wadaagayso, islamarkaana ay isku-daydo in ay talada la haaneedo, maadaama oo ay hubto in talo xumaanta saygeedu ay tahay mid aan iyada iyo qoyskeeda dhinacna u dhaafaynin. Waxay hooyadu go’aansan jirtey in ay dhexda u xidhato sidii ay u sabato bixin lahayd qoyskeeda jarka ka sii dhacaya.
Waxa’se uu saygeedu kaga jawaabi jirey in uu ganafka ku dhufto talo kasta oo ay soo jeediso afadiisu, sababtoo ah waxa uu u arkaa in haddii ooridiisu soo faragaliso howlaha maamul ee qoyskiisa, ay la mid tahay iyadoo sharaftiisa iyo karaamadiisa meel lagaga dhacayo, sideedabana ay tahay faduul iyo gardaro cad oo aan geed loogu soo gaban, taa soo ay ooridiisu ku inqilaabayso boqortooyadii uu isagu amiirka ka ahaa. Hadaba marka ay hooyadu aragto in qoyskii ay ku lafo-jabtay u burburayo talo xumaanta saygeeda, sidoo kalena aanay waxba ka qaban karaynin talo xumaanta ku habsatay qoyskeeda, waxay taasi ku abuuri jirtey xaalad uurkutaalo iyo niyad-xumaan leh, waxaanay hiifi-jirtey nafteeda iyadoo ka murugoonaysa in ay nolosha kula mataanowday arinlaawe aan waligii taladiisa ku meel marin. Dhamaad. By Cumar Axmed Cali;cumaraxmed331@gmail.com/0634244802.